Inqaku leRedmi 8T sele liza kuba luphuhliso namhlanje | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 8T linokubakho kuphuhliso ngoku
Uluhlu lweRedmi yeNqaku lukhulile ehlotyeni ngeefowuni ezimbini ezintsha, Inqaku 8 kunye neNqaku 8 Pro. Iifowuni ezimbini ezintsha ngaphakathi kuluhlu lomenzi waseTshayina. Uluhlu olunokukhula, njengoko iinkcukacha zifika malunga nefowuni yesithathu esiza kuyifumana kolu sapho. Imalunga neNqaku leRedmi 8T, ekucingelwa ukuba izakufika kungekudala kwintengiso.
Le modeli intsha ayiqinisekiswanga ngokusesikweni, kodwa iinkcukacha zokuqala sele zaziwa. Inyaniso, Sele siyazi iprosesa eza kusetyenziswa yiRedmi Qaphela 8T, Iya kuba lutshintsho olubalulekileyo xa kuthelekiswa nezinye iimodeli uphawu lwaseTshayina olusishiye ngalo ukuza kuthi ga ngoku.
KwiNqaku 8 Pro, onokuyithenga sele in Spain, uphawu lwaseTshayina lumangalisiwe yinkqubo yokudlala ekumgangatho ophakathi weMediaTek. Kubonakala ngathi abayi kuqhubeka nokuyisebenzisa, kuba kule Inqaku leRedmi 8T liza kusebenzisa iSnapdragon 730G. Yeyona chip ye-premium ekumgangatho ophakathi ejolise ikakhulu kwimidlalo.
Akuthandabuzeki oku kuya kunika ifowuni amandla ngakumbi ukodlula ezinye iifowuni ezimbini ezikoluhlu. Ngale ndlela, iya kubekwa ngaphakathi kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu, ukongeza ekubeni kugxilwe kwakhona kwimidlalo kunye namava amnandi okudlala kule meko. Iya kuba lutshintsho oluphambili.
Akusekho datha ukuza kuthi ga ngoku malunga neNqaku leRedmi 8T. Asazi ukuba le fowuni iza kuphehlelelwa nini na kwintengiso, kodwa kubonakala ngathi iza kuba kungekudala. Ke kuya kufuneka sibe nesiqinisekiso esisemthethweni esivela kwinkampani ngokwayo kungekudala.
Siza kujonga iinkcukacha malunga nale modeli intsha, ngakumbi ukwazi ukuba ikhona okanye ayikho. Kuba kuyakubanomdla ukubona ifowuni entsha kolu luhlu, kuthathelwa ingqalelo ukuthandwa kwezi fowuni. Inqaku leRedmi 8T linokuqhuba kakuhle kwimarike kwaye lenze umdla omkhulu phakathi kwabasebenzisi kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Inqaku leRedmi 8T linokubakho kuphuhliso ngoku
I-Herocraft ivula iZigZagged ukuze uzame ukubaleka iimvavanyo zamanye amazwe
Wena wedwa nxamnye namahashe angaphantsi kwekhulu kubaphangi ababuleweyo abangama-99